ဆောင်းယွန်းလ – မပြီးတာတွေလည်း မပြီးသေးဘူး | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆောင်းယွန်းလ - တရွက်ချရေးတိုင်း တရက်လျော့နေတယ်
ဆောင်းယွန်းလ - “မိုးကြီးရေကြီးထဲက ထွက်လာတဲ့စကားသံ "
ဆောင်းယွန်းလ ● ခေတ်က ခေတ်အသစ်ဆိုပေမယ့်လည်း
ဆောင်းယွန်းလ ● ကမ္ဘာပတ်ပြီးဖတ်မိတဲ့ စာမျက်နှာများ
ဆောင်းယွန်းလ ● တိမ်ငေးသူ (၂)
ဆောင်းယွန်းလ ● ကျက်သရေမရှိတဲ့အကြောင်း သောင်းပြောင်းထွေလာ
ဆောင်းယွန်းလ - တသက်စာ အလွဲများ
ဆောင်းယွန်းလ ● မမြင် မခင် မကြင်ပဲ လွမ်း
ဆောင်းယွန်းလ ● အရေးတော်ပုံ အရေးနိမ့်ခြင်း
ဆောင်းယွန်းလ – မပြီးတာတွေလည်း မပြီးသေးဘူး
ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃
ပြီးပါပြီဆိုတာတောင်မှ မပြီးတာတွေ မပြီးခဲ့သေးဘူး
မပြီးတာတွေက ပိုပြီးတော့တောင် မပြီးနိုင်သေးဘူး….
ဘာကို ဘယ်လို ဒီဇိုင်းအဆန်းထွင်ပြီး ဆင်ယင်ထားခဲ့ကြပါသလဲ
ရှပ်အင်္ကျီနောက်ကျောကို ခပ်နှိပ်ထားတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်မှာလည်း
ငါးလုံးသောအက္ခရာနဲ့ မချိပြုံးပြုံးနေတာကို တွေ့ရတတ်တယ်…..
မိုးရွာလို့ဆောင်းထားတဲ့ ထီးတချောင်းရဲ့ မိုးကာသားတွေပေါ်မှာ
ဆောင်းတွင်းဝတ် အနွေးထည်တွေရဲ့ ရင်ဘတ်နဲ့ နောက်ကျောပေါ်မှာ
အပမ်းဖြေစီး စပိဒ်ဘုတ်တွေရဲ့ ဘေးဗိုက်သား နံရံတွေပေါ်မှာ
အဖြူ အ၀ါ အနီ အမဲ ထူထူပါးပါး အရေပြားတွေပေါ်မှာ
စားပွဲပေါ်က အလှထိုးပန်းအိုးလေးရဲ့ မျက်နှာပြင်ထက်မှာ
လူတကာပါးစပ်ဖျား ရေပမ်းစားတတ်တဲ့ သီချင်းစာသားတွေထဲမှာ
အချိန်နာရီမရွေးတဲ့ နေရာအနှံ့အပြားမှာ ရာနှုန်းပြည့်မိုးလိုရွာတယ်….
ပြီးတာတွေ ပြီးပါစေတော့လို့ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ
သားပြောမယားပြော ပြောချင်သလို ပြောချင်သလောက်ပြောပြော
မပြီးသေးတာတွေက မပြီးကို မပြီးနိုင်ခဲ့သေးဘူး။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ဆောင်းယွန်းလ